के छ चैतन्य मिश्रकाे नयाँ पुस्तकमा? यस्ताे लेखेका छन् भूमिकामा – Everest Dainik – News from Nepal
के छ चैतन्य मिश्रकाे नयाँ पुस्तकमा? यस्ताे लेखेका छन् भूमिकामा
पुस्तकमा मिश्रले लेखेको भूमिकाको सम्पादित अंश : शास्त्रगत हिसाबले मेरो परिचय समाजशास्त्रीको रह्यो । तर खासमा विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र नै पढेको ७ वर्ष जति मात्रै हो । वास्तवमा त्यो खास शास्त्र ज्ञान आर्जन गर्ने धेरै ढोकामध्ये एउटा हो । त्यो ढोकाबाट छिरेपछि खासको शास्त्रको सीमाभित्र बसी नै रहनु आवश्यक रहँदैन ।
वास्तवमा कुनै पनि शास्त्रको अनुल्लङ्घनीय सिमाना नै हुँदैन । जुन हदमा सिमानाहरू बनेका छन्, ती खास ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा बनेका हुन् । ती ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य परिवर्तन हुँदा ती सिमाना र पर्खाल पूर्ववत् किसिमले रहन सक्ने भएनन् । अर्थात् शास्त्रको सिमानालगायत अन्तर्वस्तु पुनः परिभाषित नभई रहने हो भने शास्त्र प्राणविहीन बन्छ । विश्व–इतिहासमा प्राणविहीन बनेका शास्त्र वा अन्य शास्त्रसँग सन्धि गरेर अघि बढेका शास्त्रको लामै सूची छ ।
यो हाँगाका केही मूल मन्त्र छन् : एक– जे सूक्ष्म छ, त्यो कुनै पनि बृहत्को अङ्ग हो । त्यसलाई त्यही किसिमले बुझ्नुपर्छ । सूक्ष्म आफैँमा पूर्ण हुँदैन । दुई– हरेक वर्तमान महत्त्वपूर्ण छ र कतिपय सम्भावनाले युक्त छ । तर पनि हरेक वर्तमान असीमित सम्भावनाहरूले युक्त हुँदैन किनभने हरेक वर्तमान लामो ऐतिहासिक शृङ्खला, चक्र, भार, प्रवाहको अंश हो । हरेक वर्तमानलाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ । तीन– विश्व, इतिहासलगायत व्यक्ति विविधतायुक्त छन् । ती असमान, अन्तरविरोधयुक्त र सर्वथा परिवर्तनशील छन् ।
तिनलाई यही सेरोफेरोमा बुझ्नु उचित छ । चार– विश्व, इतिहास, प्रकृति र व्यक्ति आदि एक–आपसमा उनिएका छन् । एक–आपसमा नितान्त असम्बन्धित वा नजेलिएका केही पनि छैनन् । यस्ता सहसम्बन्ध र कार्य–कारण सम्बन्धको खोजबिन गर्नु नै शास्त्र र ज्ञानको उद्देश्य र मर्म हो । समग्र विश्वविद्यालयको ध्येय नै यही हो ।
‘नयाँ जमाना’ वा आधुनिकता आदिले लोकतन्त्र जन्माउने पनि होइन । ‘नयाँ जमाना’ वा आधुनिकता स्वतः लोकतान्त्रिक हुने भए भविष्यबारे हामी केही निश्चिन्त हुन सक्थ्यौं र सिङ्गो विश्व वा नेपाल चिरकालसम्म लोकतान्त्रिक रहनेमा विश्वस्त हुन सक्थ्यौं । तर भविष्य लोकतान्त्रिक नै रहने छ भनी किमार्थ भन्न सकिँदैन । नेता वा राजनीतिक दलका भाषण वा कर्मले पनि लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव हुने पनि होइन ।
यस हिसाबले केही लेखमा लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव केही ऐतिहासिक र अन्योन्याश्रित संरचना र प्रक्रियासँग गाँसिएका छन् भन्ने तथ्य उजगार गर्ने प्रयत्न भएको छ । खास गरेर सामन्तवादी र पूर्व–पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थामा किन लोकतन्त्र स्थापित हुन सक्दैन, किन पुँजीवादी व्यवस्थामा मात्रै ‘आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने’ किसान र नागरिकले लोकतन्त्र स्थापित गर्न सक्छन् भन्ने निचोड अघि सारिएको छ । तर, पुँजीवादले लोकतन्त्र स्थापित गर्न सधैँ मद्दत गर्छ भन्ने पनि होइन ।
कतिपय विकसित पुँजीवादी समाज र राज्य एकतान्त्रिक थिए र छन् । ती जातिभेद, जातभेद, लिङ्गभेद युक्त थिए र छन् । तसर्थ लोकतन्त्रको प्रादुर्भावका लागि, लोकतन्त्रको दिगोपनाका लागि पुँजीवाद सबैभन्दा आवश्यक तत्त्व भए पनि पुँजीवाद लोकतन्त्रको पर्याय भने पक्कै होइन । यिनै सन्दर्भलाई पक्रिएर यहाँ केही लेख अघि सारिएका छन् ।
यस किताबमा उठाइएको दोस्रो विषय हो– माओवादी राजनीति र ‘जनयुद्ध’ । एउटा लेखमा केन्द्रित रहेर, अन्य कतिपय लेखमा भने छरिएर यसबारे चर्चा गरिएको छ । र भनिएको छ, गणतन्त्र र समावेशिताजस्ता दुईवटा क्षेत्रमा माओवादीको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । यद्यपि कालान्तरमा यी दुवै क्षेत्रमा अन्य राजनीतिक शक्तिको पनि योगदान रह्यो । र, यो पनि यहाँ भन्नुपर्छ— माओवादीले यी दुवै मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर ‘जनयुद्ध’ को थालनी गरेका पनि होइनन् । तर पनि माओवादी राजनीति र ‘जनयुद्ध’ लगायत मुलुकको सिङ्गो राजनीति जसरी विकसित हुँदै गयो, त्यसअन्तर्गत माओवादी राजनीतिले गणतन्त्र स्थापित गर्ने र समावेशितालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने काममा नेतृत्व गरेको हो ।
उता एकदलीय सोभियत प्रणाली र लेनिनवादी दृष्टिकोणअन्तर्गत जातिगत शाश्वतता र जातीय राज्यको वकालत संविधानसभा भाँडिरहने औजार बन्यो । त्यसले जातीय द्वेषलाई नयाँ रूप पनि दियो र विभाजनकारी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई प्रश्रय पनि दियो । एकदलीय पद्धति र जातीय राज्य सोभियत संघमा जस्तै सँगसँगै जाने र एक–अर्काका परिपूरक बन्न सिद्धान्ततः सक्थे होलान् । तर कालान्तरमा बहुदलीयता स्वीकार गरिसक्दा पनि जातीय राज्यको वकालत गरिरहनु र तीबीच अन्तरविरोध नदेखेझैं गर्नु माओवादीलगायत नेपालकै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो ।
ट्याग्स: चैतन्य मिश्र